Lapan’ny kolontsaina: mihamaro ny tanora mankafy an’i Lalatiana | NewsMada
Lapan’ny kolontsaina: mihamaro ny tanora mankafy an’i Lalatiana
Tafaray ny tia sy ny manina, omaly tolakandro tetsy amin’ny lapan’ny Kolontsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina. Tsy iza ireo fa i Lalatiana sy ny mpankafy azy. Nahafinaritra ny fihaonana ary tsikaritra ny fahamaroan’ny tanora.
Efa ela ny niandrasana ity fampisehoan’i Lalatiana ity, izay efa tokony natao tamin’ny taon-dasa saingy tsy maintsy nahemotra noho ny trangan’aretina teto amintsika. Noho izay fotoana elaela tsy nihaonan’ny roa tonta izay, nafana ny fiarahana, omaly tolakandro.
Vao nanomboka ny fampisehoana, tafiditra avy hatrany tao anatin’ilay « fahalinana » mihaino an’i Lalatiana ireo tonga teny an-toerana. Nisantaran’ity mpanakanto ity ny sehatra mantsy ireo hira nahafantarana azy hatramin’izay, izay tsy mbola afaka am-bavan’ny maro sy tsy lany hamamiana, toy ny « Nofy » sy « Avelao any ».
Niavaka ny fampisehoana, satria nitondra zava-baovao maromaro, toy ny ekipa mpitendry zavamaneno teny ambony sehatra. Marobe izy ireo raha miohatra ny tamin’ny seho hatramin’izay ary tanora ny ankamaroany. Na eo aza ny maha tanora azy ireo, manana talenta sy fahaiza-manao efa avo lenta sy mendrika ny hiara-dia amin’i Lalatiana, andrarezin’ny mozika malagasy.
Teo ihany koa ny andriambavilanitra mpanao feolafika, manana feo manga. Azo lazaina ho zava-baovao ihany koa ny sehatra, nivalamparan’ireo mpanakanto, i Lalatiana sy ireo mpitendriny. Na izany aza anefa, tsapa ny fifanakaikezana sy ny fifamatorana teo aminy sy ny mpankafy, tonga maro teny an-toerana.
Mikasika izay indrindra, efa ela ny nahalalana an’i Lalatiana sy ny hakanton’ny feony ary ny gadon-kirany. Na izany aza, tsy vitsy ny tanora ankehitriny, babony. Nanaporofo izany ny fahamaroan’izy ireo tonga nijery ny fampisehoana, omaly. Antenaina fa mbola hifandimbiasan’ny taranaka maro ny fanekena fa manan-talenta i Lalatiana.